Mitatra Any Amin’ny Fanorenana Tranobe Raitra Ho An’ny Governemanta Ny ‘Aretin’ny Figalabonana’ Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Mitatra Any Amin'ny Fanorenana Tranobe Raitra Ho An'ny Governemanta Ny ‘Aretin'ny Figalabonana’ Ao Shina
Voadika ny 13 Desambra 2012 3:31 GMT
Tsy zava-baovao ao Shina ny tranobe mirentirentin'ny governemanta, kanefa kosa, tsy misy azo ampitahaina amin'ny tranobe vaovaon'ny governemanta ao Jinan, renivohitry ny fairtany atsinanan'i Shina, Shandong.
Araka ireo tatitry ny mpilaza vaovao [zh], ny “Long Ao building” dia mitentina 4 lavitrisa RMB (640 tapitrisa dola amerikana), ary ny lehibe indrindra sy lafovidy indrindra amin'ireo tranon'ny governemant any Shina.
Ilay tranobe mitentina 4 lavitrisa RMB an'ny Long Ao no lehibe sy lafovidy indrindra amin'ireo tranoben'ny governemanta any Shina. Dikasarin'ny fàfana avy amin'ny tatitry mpampahalalal vaovao tao amin'ny youku.
Marobe ireo mpisera ety anaty aterineto no nampitaha ny tetibolan'ilay tranobe 4 lavitrisa amin'ny 180 tapitrisa, fandaniana ataon'ny tanàna ho an'ireo mahantra ao an-toerana hatramin'ny 2003.
Manampahefana iray avy amin'ny governemantan'i Jinan no nanazava tamin'ny 11 Desambra 2012 fa ilay fampiasam-bola 4 lavitrisa dia nahitàna ny sandan'ny fandravàna ilay trano tranainy teo aloha ary ny fanamafisana ny tany hanorenana. Nanamafy izy fa “tsy nisy fa ‘penny’ iray avy amin'ny volan'ny governemanta nampiasaina” satria ny vola dia avy amin'ny fanoloana ireo tranobe tranain'ny governemanta.
Ilay fanehoan-keviny feno tsy firaharahiana dia vao mainka nitondra hatezerana bebe kokoa tety anaty aterineto, nahitàna mpisera marobe nitaky ny mangarahara. Ireto ambany ireto ny fanehoan-kevitra sasany avy amin'ireo manampahaizana sy bilaogera fanta-bahoaka ary ireo mpanangom-baovao.
Resaka maneso :
于建嵘: Fa inona no tsy milamina amin'ilay mpanao trano e? Tokony hokarohantsika ilery. Nahoana io no tsy nataony ho ny fotodrafitrasa tokana goavana indrindra eran-tany?! Fomba haha-mendrika azy eto amin'ity firenena goavana ity sy ny fotoam-pahombiazany izany!
抚顺李明律师: Satria ny fianakavian-dry zareo any Amerika, dia tsy maintsy mba somary man,etry tena ry zareo e.
Antso hisian'ny Mangarahara Bebe Kokoa:
恩吉尔斯奈特: Am-panetren-tena, sambany aho izao mba nahita birao goavambe iray an'ny governemanta, tena taitra be aho. Ilaina ny mba hahafantaran'ny daholobe ny loharanom-bola.
菁菁远山: Raha miteny ny governemanta fa “tsy nisy volan'ny governemanta nampiasaina”, midika izany fa manana fahafahana matanjaka be ny governemantan'i Jinan hanao zavatra, lasa “toby matanjaka mpamokatra angovo” ny governemanta, izay ny goavana dia goavana tokoa ny fahafahany mihetsika sy ny haavony. Tsy isalasalàna fa fitaratra iray itarafana ny fiarahamonina Shinoa ilay tranobe ao Long Ao.
吴龙贵: “Ity “ hoe tsy nisy volan'ny governemanta nampiasaina io” dia vao mainka tsy azo leferina noho ilay tranobe mirentirenty tenany mihitsy, satria dia fihantsiana tsotra izao, tsy firaharahiana mivandravandra loatra momba izay mety ho hevitry ny vahoaka. Mampiseho io fa ny governemanta ao an-toerana dia tsy manana fahalalàna matotra momba ny fampiasana ny vola sy ny fananam-bahoaka. Ananan'ny olona tsirairay tsara mihitsy ny antony hametrahany fanontaniana hoe, ao ambadik'ity tranobe raitra ity, ohatrinona amin'ny volan'ny vahoaka mpandoa hetra no nobankoavina tamin'ny anaran'ny hoe “sy nisy volan'ny governemanta nampiasaina”?
和讯网评论:Ahoana no fomba hitsaboana “ny aretin'ny figalabonana” amin'ny resa-panorenana tranobe ho an'ny governemanta? Ilaina ny fanamafisana ny fandraisana andraikitr'ireo manampahefan'ny governemanta amin'ny alàlan'ny fifehezan'ny lalàna. Nampiasa volam-bahoaka ny fanorenana tranobe ho an'ny governemanta, ilain'ny Kaongresy Nasionalim-bahoaka ny mampihatra fanarahamaso ny tetibola, mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fampiroboroboana ny mamngarahara amin'ny resaka tetibola.
1 andro izayKambodza
Kambodza, mpikatroka mpiaro tontolo iainana voaheloka fa nikasa hikarakara “fandehanana ataom-behivavy tokana”
2 andro izayVietnam
Ny sandan'ny fanoherana: Ny vehivavy sy ny fikatrohana pôlitika ao Vietnam